Galmudug iyo Ahlusuna oo diiday inuu wasiir ka tirsan XFS ka qayb noqdo shirka maanta uga furmayo Jabuuti
arlaadi November 27, 2017 No Comments
Wararka ka imanaya dalka Jabuuti ayaa sheegaya inay maamulada Ahlusuna iyo Galmudug oo wejiga labaad ee wadahadaladoodu ka furmayaan maanta magaalada Jabuuti iska diideen inuu qayb ka noqdo kulankooda wasiiru dowlaha arimaha gudaha xukuumada Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Weheliye oo uu raisalwasaare Khayre u dirsaday inuu ku metalo shirka ka fumayo Jabuuti.
Maamulka Galmudug ayaa ku eedeeyay wasiiru dowlaha inuu ahaa wasiirkii qoray warqadii lagu taageerayay mooshinkii ay qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug ka keeneen madaxweynahooda Xaaf kuna sheegeen inay xilka uga qaadeen sidaas darteedna aanay suurta gal ahayn inuu shirka qayb ka noqdo.
Wefdiga Galmudug ayaa sheegay in haddii ay dowlada Soomaaliya cid usoo dirsanayso kulanka ka dhacayo Jabuuti ay tahay inay soo dirsato wasiirka arimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juxa kaasoo leh mudnaanta ka qayb galka shirka.
Dhanka kale Ahlusuna ayaa sheegtay inaysan raali ka ahayn ka qaybgalka shirka ee wasiiru dowlaha arimaha gudaha Soomaaliya loona baahanyahay inay dowlada Soomaaliya soo dirsato wasiirkeeda arimaha gudaha.
Sheekh Shaakir oo ah madaxweynaha maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlusuna ayaa dhowaan sheegay in ayaga iyo Galmudug aanay dagaalsanayn balse lagu dhex jiro lana diidanyahay inay heshiiyaan.
Wejigii koowaad ee kulanka u dhexeeya Ahlusuna iyo Galmudug ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayada oo ay garwadeen ka tahay IGAD